\_'मैदारो\_' अरु विधामा लेख्न सक्दिनथेँ : भूपिन [अन्तर्वार्ता]
'मैदारो' अरु विधामा लेख्न सक्दिनथेँ : भूपिन [अन्तर्वार्ता]
भूपिन | २०७५ फागुन २५ शनिबार | Saturday, March 09, 2019 ०८:१०:०० मा प्रकाशित
कवितामा लामाे समय संगत गरेका भूपिन निबन्ध हुँदै उपन्यासकाे यात्रामा छन्। 'क्षतिग्रस्त पृथ्वी र मूल सडक', 'हजार वर्षको निन्द्रा' र 'सुप्लाको हवाईजहाज' कवितासंग्रह तथा 'चौबीस रिल' निबन्ध संग्रह प्रकाशन गरिसकेका उनको नयाँ उपन्यास 'मैदारो' सार्वजनिक हुँदैछ। नयाँ उपन्यास र लेखन अनुभवबारे उपन्यासकार भूपिनसँग नेपाल लाइभका विमर्श कँडेलले गरेको कुराकानी:
कृतिहरू लेखकका त्यस्ता सन्तान हुन्, जसलाई उसले गर्भमै पालनपोषण गर्छ र गर्भमै हुर्काउँछ। हाडमासुका सन्तानलाई झैँ यीनीहरूलाई जन्माएपछि स्याहारसुसार गरिरहनु पर्दैन। कृति जन्माउनु र हुर्काउनुको सम्पूर्ण दु:ख 'गर्भे' समयमै भोग्छ लेखकले। जन्मेपछि लेखकका यी सन्तान पाठकहरूको मनमा हुर्किन्छन्।
एक लेखकका रुपमा वर्षाैंते सन्तान जन्माउने क्षमता मसँग छैन। मेरा कृतिहरू जिजीविषाको लागि भागदौडको बीचमा जन्माइएका मानसिक सन्तान हुन्। मैले चाहेर पनि धेरै लेख्न सक्दिन। मलाई लाग्छ, मेरो दिमाग त्यति धेरै उर्वर छैन। खासमा मलाई धेरै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि अझैसम्म लागेको छैन। 'हजार वर्षको निद्रा'बाट ब्युँझिएको ३ वर्षपछि 'चौबीस रिल' आयो। त्यसको ३ वर्षपछि 'सुप्लाको हवाइजहाज'को आविष्कार भयो। त्यसको पनि ३ वर्षपछि मैदारो आउँदैछ। मेरो लेखनकाे रफ्तार यही हो।
कतिपय दु:खहरू यस्ता हुन्छन्, जसले मानिसलाई आनन्द दिन्छन्। लेखनको दु:ख यस्तै हो। दु:ख हुन्छ भनेर आमाले पेटको बच्चाको ख्याल नगरेको कहाँ छ र? जन्माएपछिको आनन्द वर्णानातीत हुन्छ। फेरि कसैले दबाब दिएर म साहित्यमा आएको होइन। यो त मैले प्रेमले रोजेको क्षेत्र हो। सुख त सुनौलो प्राप्ति भइहाल्यो। यसका दु:खप्रति पनि मेरो कुनै गुनासो छैन। म मेरा पात्रका दु:ख र उदासी लेख्दा दु:खी हुँला तर, लेखिसकेपछि मलाई असीम आनन्द आउँछ।
जहाँसम्म उपन्यासको कुरा छ, यो लेखकले निर्माण गरेको अलग दुनिया भएकाले मूलत: रोमाञ्चक यात्रा नै हो। 'एडभेन्चरस् जर्नी'।
कुनै-कुनै सिर्जनाका प्रेरणा स्राेत त अनौठा र अचम्मित पार्ने खालका हुन्छन्। 'मैदारो' लेखनको प्रेरणा श्रोत एक बाख्रा हो, जुन मेरै गाउँको पाटेभीरबाट लडेर बीचमा अड्कियो र बाँच्यो। केही महिना त्यसले भीरको एकान्तमा संघर्षपूर्ण जीवन बितायो। त्यसलाई उद्धार गर्ने मसँग शक्ति थिएन। म केवल उद्धारको कल्पना गर्न सक्थेँ। केही महिनापछि त्यस बाख्रालाई कुनै व्यक्तिले भीरबाट निकालेर काटेर मांसभक्षण गरेको खबरले म स्तब्ध भएँ। उपन्यासको बिजारोपणमा यसैको प्रेरणा छ।
मैले त्यो बाख्रा र मानिसको जीवनलाई तुलना गरेर हेर्न थालेँ। सामाजिक विभेदका कारण हजारौँ वर्षदेखि मानिसको दर्जा नपाएका मानिसहरूको जीवन भीरमा अड्किएको त्यही बाख्राको जस्तो रहेकाे महसुस भयो मलाई। लाग्यो, छुवाछुतको कारण ती सारा मानिस त्यही बाख्राको नियति भोगिरहेका छन्। दिमागमा आएको यही अन्तप्रज्ञाका कारण मैले उपन्यास लेख्ने सोच बनाएको हुँ। 'मैदारो' एक अछुत (कथित छुतहरूले भन्ने गरेको) को आँखाबाट जीवन, समाज र समयप्रतिको दृष्टिकोण हो। अनुभूति, संघर्ष, संवेदना र विचारको कथा हो।
मैले यो उपन्यास लेख्ने सङ्कल्प गर्दा आख्यानका यति धेरै पाठक थिएनन्। तेइस वर्ष अघिको कुरा थियो त्यो। जहाँसम्म प्रकाशकको कुरा छ, उपन्यासको बिउ टुसाएको बेला 'बुक हिल'को जन्मको कल्पना पनि थिएन सायद।
खेलमा पनि अलराउण्डर खेलाडीहरूको प्रंशसक म, लेखनमा पनि अलराउण्डर लेखक मन पराउथेँ। मन पराउँछु। मेरो अनुभव भन्छ, हरेक विषयवस्तुलाई एउटै फ्रेममा उही गहिराइमा लेख्न सकिन्न। लेख्नु हुन्न पनि। 'मैदारो' मैले अरू विधामा लेख्न सक्दिनथेँ। त्यसकारण मैले उपन्यास नै लेख्ने मन बनाएँ।
यस्तो कुरा मैले पनि सुनेको छु। पाठकका रुचिहरूलाई ध्यान दिनु पूर्णत: गलत होइन। पाठक र लेखकको रुचि मिल्यो भने राम्रै हुन्छ। तर, म आत्मविश्वासपूर्वक भन्न सक्छु, मेरो हकमा 'बजार र प्रकाशकको दिशाबोध'को कुरा लागु हुन्न। लेखक स्वायत्त हुने भएकाले मलाई लेखनका लागि आफ्नै मनको हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ।
विषयवस्तु प्रभावकारी भएर पनि कथा भन्ने शैली, आख्यानात्मकता र कलाको न्यूनताका कारण नेपाली उपन्यास जीवनी मात्र बने। प्रयोगशीलतामा हामीहरू अल्छी भयौँ। मलाई विश्वास छ, 'मैदारो'ले यस अभावलाई थोरै भएपनि पूर्ति गर्नेछ।
पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा चल्ने गरेको एक सघन विषय छ- 'सामाजिक र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादले नेपाली आख्यान ध्वस्त बनाएको छ।' मलाई पनि केही हदमा यो सत्य लाग्छ। विषयवस्तु प्रभावकारी भएर पनि कथा भन्ने शैली, आख्यानात्मकता र कलाको न्यूनताका कारण नेपाली उपन्यास जीवनी मात्र बने। प्रयोगशीलतामा हामीहरू अल्छी भयौँ। मलाई विश्वास छ, 'मैदारो'ले यस अभावलाई थोरै भएपनि पूर्ति गर्नेछ। सामाजिक यथार्थलाई प्रयोगशील फ्रेममा लेख्दाको स्वाद यसमा भेटिएला।
'मैदारो'को अर्को महत्वपूर्ण स्वाद बागलुङ पर्वततिर बोलिने पर्वतेली भाषाको प्रयोग पनि हो।
विमर्श भाइ, चितवनमा 'पर्खालमा कला' गर्नुको कारण चित्रकलाप्रतिको यही प्रेम नै थियो। आफ्ना विशिष्ट कलाले पर्खाललाई सुन्दर पार्ने सबैप्रति आभारी छु। मैले उपन्यासका लागि धेरै कुरा उनीहरूको संगतमा पनि सिकेको छु।
अफ द बिट' कुराकानीका क्रममा उपन्यासभित्र ‘अधेँरी गाउँ’को चित्रण गरेकाे बताउनु भएकाे थियाे। के यो लेखक स्वयंकै गाउँ हो?
दुर्भाग्यवस हामी नेपाली छुवाछुतको महामारी फैलिएको समाजमा हुर्किन्छौँ। म त्यहीँ हुर्केँ। दुनियामा अन्यत्र कहीँ अभ्यासमा नरहेको 'मानिसले मानिसलाई छुन नहुने' होचोहेलो मैले नजिकबाट देखेँ। नबुझ्ने बेलासम्म मैले पनि यस्तो अमानवीय काम गरेँ। कथित उपल्लो जातमा जन्मिएका कारण मैले कसरी प्रकृति र राज्यका सुविधाहरू उपभोग गर्न पाएँ? र मेरा साथीहरू कसरी वञ्चनामा परे? यी सब नजिकैबाट नियाल्न पाएँ। बुझेँ, हाम्रो जीवन कसरी उनीहरूको श्रममा टिकेको छ? हाम्रो प्राण कसरी उनीहरूको कारण धड्किएको छ?
मेरो स्वभाव नै यस्तै छ विमर्श। 'खतरा अध्ययन गरेर र कसैले नगरेको मेहनत गरेर मैले उपन्यास लेखेको छु' भन्न मलाई आउँदैन। यो सत्य पनि होइन। त्यसकारण म मेरा हरेक कृतिमा 'जिस्किएको हुँ' भन्न रुचाउँछु। पात्रहरूप्रति कति न्याय वा कति अन्याय गरेँ, त्यो मेरो लेखनले भन्ने कुरा भयो। म पाठकहरूको धारणा सुन्न प्रतीक्षारत छु।